Lifuna ukukhula iqembu legqomu | News24
Lifuna ukukhula iqembu legqomu
ISITHOMBE: sithunyelweAmanye amalunga eqembu i-Hectic Fam.
IQEMBU lomculo wegqomu i-HecticFam lithi lifuna ukukhula endimeni yezomculo ukuze lizokwazi ukuthi liphakamise idolobha lase­Mgungundlovu nokuyilapho bedabuka khona.
Leli qembu elinamalunga ayisishiyagalombili (abafana abahlanu namantombazane amathathu) lizokhipha i-album, yalo yokuqala ngqa esihloko esithi Kill the Vibe nezophuma ekupheleni kwenyanga kaMbasa (April).
Amalunga aleli qembu uSphesihle Khwela, Sabelo Ndiyashe, Luthando Mchunu, Phumlani Mbambi, Sphesihle Ngcobo, Dumisani Sabela, Asanda Masondo kanye no-Asanda Mkhize. Abesilisa badabuka e-Ashdown kantI abesifazane bona badabuka eMbali Phase 4.
Kule-album yabo entsha kukhona nengoma esihloko sithi Pho Kunani nalapho becula khona no-Dason nowaduma kakhulu kwingoma ebeyishisa izikhona esihloko esithi Eyadini lapho ecula khona noMaqongqo.
Elinye ilunga laleli qembu uLuthando Mchunu uthe bajabule kakhulu ukuthi nabo ekugcineni sebezokwazi ukuthi babe ne-album yabo enezingoma zabo.
“Okusijabulisa kakhulu ukuthi sithe siqala ukukhipha i-album sakwazi ukuthi sicule nomuntu osedumile noseyazi kakhulu indima yezomculo.
Sikujabulelile kakhulu ukusebenza naye kanti futhi siyathemba ukuthi umculo wethu abantu bazowuthokozela ngesikhathi sekuphume le-album,” kubeka yena.
Uqhube wathi njengoba sebezokhipha i-album yabo yokuqala isifiso sabo ukuthi ingagcini nje eMgungundlovu kuphela kodwa bafuna ukukhula emculweni nabo bagcine sebaziwa izwe lonke.
“Enye into esifuna ukuyenza ukukhuthaza intsha ukuthi yazi ukuthi ayikho into engenzeki uma ngabe uzimisele ngaleyonto ihleli izokwenzeka akumele ulahlele ithawula.”